ကြီးထွားမှု၏ ၆၀% ကို ကလေး၏ ပထမဆုံး ၅နှစ်မှာ ရရှိကြပါသည်။ 1
ဒါကြောင့် သင့်ကလေးအတွက် အရေးကြီးသော ပထမဆုံး (၅) နှစ်တာကာလမှာ အကောင်းဆုံး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုရရှိဖို့ ပြည့်စုံမျှတသော အာဟာရဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးလိုက်ပါ။
ပိုမိုသိရှိရန် ယခု Video ကို ကြည့်ပါ။
1. WHO Growth Standard, 2007
ပထမဆုံး ၅ နှစ်တာကာလမှာ သားသားမီးမီးတို့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့ အာဟာရဓာတ်က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ 1
ပျမ်းမျှအားဖြင့် သင့်ကလေး၏ မွေးစကနေ (၅)နှစ်အထိ တစ်နှစ်လျှင် ၁၂ စင်တီမီတာအထိ ကြီးထွားနိုင်သည်။ သို့သော်ဤအချိန်ကာလအတွင်း လုံလောက်သောအာဟာရဓာတ်မရှိလျှင် သင့်ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှု ရပ်တန့်နိုင်ခြေရှိသည်။
1. Jelekovic, A. et al. Genetic and environmental influences on height from infancy to early adulthood: An individual-based pooled analysis of 45 twin cohorts. Sci. Rep.6, 28496; doi: 10. 1038/srep28496 (2016)
သင့်ကလေး အကောင်းဆုံး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ Pediasure သည် ကလေးများ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက် သိပ္ပံနည်းကျ အတည်ပြုထားသော ကလေးအာဟာရဖြည့်စွက်စာ ဖြစ်သည်။ Pediasure သည် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရပ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်၊ ကိုယ်ခံစွမ်းအားတို့ ကောင်းမွန်အောင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ကြောင်း ဆေးသုတေသန လေ့လာမှုများအရ အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ 1,2
1. Huynh DTT et al. J Hum Nutr Diet (2015), 28, 623-635. Longitudinal growth
and health outcomes in nutritionally at-risk children who received long-term
2. Huynh DTT et al. 5th International Conference on Nutrition & Growth 2018. Oral nutritional supplementation improved linear growth in Filipino children at nutritional risk
သင့်ကလေးကို အကောင်းဆုံးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုရရှိအောင်ကူညီပေးလိုက်ပါ။ Pediasure အသစ်မှာ အာဂျီနင်း၊ သဘာ၀ဗီတာမင်ကေ ၂ နှင့် အာဟာရ ၃၇မျိုးပါဝင်တာကြောင့် သင့်ကလေး၏ အကောင်းဆုံး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု ရရှိစေရန်ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
အာဂျီနင်းသည် အရိုးများ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက် တစ်ရှူးများမှ လိုအပ်သော ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု ဟော်မုန်းထွက်ပေါ်မှုကို ကူညီပေးပြီး အရိုးများကို ပိုမိုကြီးထွားစေသည်။ 1
ဗီတာမင်ကေ ၂ က Osteocalcin ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အရိုးကြံ့ခိုင်မှုအတွက် လိုအပ်သော ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ် ရရှိအောင် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် အရိုးများကို သဘာ၀အတိုင်း သန်စွမ်းအောင် ကူညီပေးသည်။ 2
1. Van Vught AJ et al. Br J Nutr (2013), 109, 1031-1039. Dietary arginine and linear growth: the Copenhagen school child intervention study.
2. Van Summeren MJ et al. Br J Nutr (2008), 100, 852-858. Vitamin K status is associated with childhood bone mineral content.